Shaya inobuda mubhizimusi requantifier | IPhone nhau
Shaya inobuda mubhizimusi requantifier
Ignacio Sala | | Apple Watch, Kupikisana
Musika wequantifiers wakareba kubuda, kunyanya kana smartwatches ikave yakakurumbira pakati pevashandisi, nekuti vanhu vazhinji vaida kukwanisa kuona kwavo kwese kuita kuburikidza nechinhu chimwe, asi Ini ndanga ndisingafunge kana kuda kutenga smartwatchasi iwe waingoda nyore rundarira iyo inokutendera iwe kuti udaro.
Shaya yakanga iri imwe yemapiyona ekuunza zviyero zvakaenzana kumusika, bhizinesi rakazowedzerazve kumatauri asina waya. Asi panguva yebasa rake anga ave nematambudziko akasiyana siyana, kunyanya nezvinhu zvakasarudzwa pakugadzira kwavo, izvo dzimwe nguva zvaikonzera kutsva kune vashandisi.
Asi chii chave kumurwadzisa chaizvo kusvika kwenhamba huru yevagadziri kumusika, kuvhura michina ine zvakafanana mabasa asi pamutengo wakanyanya kuwanda kupfuura iyo Jawbone firm. Zviri pachena kuti haina kukwanisa kuchinjika nekukasira kune zvido zvemusika, uye haina kukwanisa kuhwina vashandisi vanofarira rudzi urwu rwechigadzirwa avo vakasarudza Fitbit, iyo kambani iyo parizvino inotengesa yakanyanya kuwanda zvishongo. kutenderera pasirese. nemaiyuniti mamirioni 4,8 akatengeswa mukota yekutanga yegore.
Kushaikwa kwehunyanzvi mukambani hakuna kukwanisa kudzivirira kambani yarasikirwa nehafu kukosha kwayo mune rinopfuura gore. Uye zvakare, iyo yazvino delo yakatangwa pamusika, chiverengero chinogadzirisa chine mutengo we120 euros ndiyo imwe yesarudzo dzakaipisisa dzatinogona kuwana mumusika. Izvo zvakare hazvipikisane nemvura. Zvese izvi zvisarudzo zvisina kuitwa zvakanaka zvakamanikidza kambani kusiya basa raive rinotarisa parizvino uye kuyedza kuzvimisazve. Sekutaura kwaJabone CEO Hosain Rahman kuna Tech Insider, chinangwa chekambani chinotarisa mukugadzira zvinopfeka zvehutano, kwete kungoongorora kurovedza muviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Shaya inobuda mubhizimusi requantifier
Apple's itsva AirPort inogona kunge iri mhinduro yako kuAmazon Echo uye Google Imba
Yekupedzisira kutsungirira kuyedzwa kweiyo iPhone 6s uye Galaxy S7